सम्झनामा तिर्थ सर अर्थात एकचेपाली साहिलो
तिर्थ सर अर्थात एकचेपाली साहिलो लामो समय देखि नेपाली प्रगतिशिल साहित्यमा कलम चलाउदै आउनु भएको एक जना साधकका रुपमा २०५० साल तिर देखि नाम सुन्न थालेको र पत्रपत्रिकामा कविता पढ्न थालेको नाम थियो । दर्जनौ पटक पढ्दा समेत कहिले मात नलाग्ने कविताहरु सृजना गर्न सक्ने क्षमता भएका कवि एकचेपाली साहिलो अर्थात तिर्थ सर । शासकहरुको तिब्र आलोचना र गरिव दुखिको पक्षमा उनका कलमले संधै वकालत गरिनै रहे । अन्याय र अत्यचारका विरुध्द आगो ओकल्ने एकचेपाली साहिलो आज पनि अत्यचारका विरुद्धमा वोल्दा बोल्दै आफ्नो देह त्याग गर्नु भयो । जीवनको अन्तिम क्षण पनि उनले मुठिभर मान्छेको हातबाट विकास र समृद्धिका बाटोहरु निमोठिएको निष्र्कषका साथ आफुलाई गरिविको रेखा मुनी रहेका, आवाज विहिन जनताको असली साथीको रुपमा यो दुनियालाई चिनाएर संधैका लागि अस्ताउनु भयो । विकास आफ्नो अनुकुल गर्न चाहानेहरुको विकास पहुचवालाहरुका हातबाट जनताका हातमा पुर्याउनु पर्छ भन्दा भन्दै जीवनको गति रोक्नु भयो । गरिवीको रेखामुनी रहेका आवाज विहिनहरुको प्रतिनिधिका रुपमा आफुलाई सतिसाल झै उभ्यिाउने एउटा असल अविभावक समाजले गुमायो । निडर हक्की स्वभावका धनी जनताका प्यारा अविभावक समाजले गुमायो ।
मैले २०५६ सालमा तिर्थ तिम्सीनालाई चिन्ने अवसर पाए उनका कविताहरु निहाल्ने अवसर पाए पहिलो पटक । त्यतिबेला हामी क्याम्पस पढ् थियौं । क्याम्पसमा दर्जनौ कवि गोष्ठी हाम्रै पहलमा भए तिर्थ सरलाई हामी बोलाउन छुटाउदैन थियौ । तिर्थ सर अर्थात एकचेपाली साहिलो आए पछि साहित्यिक गोष्ठी र भेलाहरुको ओझनै फरक पथ्र्यो । उनका व्यङ्गबाढले कता कता ठोक्थ्यो थाहा नै नहुने । हाँस्दा हाँस्दै रुवाउने उनको कलालाई सलाम गर्नु पर्छ । उनी जहिले पछाडी पारिएका र आवाज विहिनहरुको आवाज बने र डुक्रिए साहित्यका मञ्चहरुबाट शासकका विरुद्धमा । पञ्चायती कालरात्री होस या ससस्त्र जनयुद्धका बेला जनताका पक्षमा आफुलाई उभियाइ रहे दर्जनौ पटक उनी माथि साशक र बिद्रोहीहरुले धावा बोल्दा समेत कहिले बिचलित बनेनन् । निरन्तर अन्याय र अत्यचारका बिरुद्ध खबरदारी गरिरहे । अन्त्यत उनको असली परिचय नै त्यही बन्यो जो आम नागरिक भन्दा फरक ।
तिर्थराज तिम्सिनाले नेपालको एकतन्त्रिय पञ्चायत बेहोरे बहुदल अर्थात प्रजातन्त्रको स्थापनाका निम्ती उनका दर्जनौ साहित्यिक सृजनाहरु प्रष्फुटन भए जसले नेपाली साहित्यमा एउटा क्रान्तिको संखघोष गरेको छ । उनका सृजनाले हजारौ मान्छेलाई सडकमा उतारेको छ । अन्यायका बिरुध्दमा लड्न सक्ने सामर्थको साहस भरिदिएको छ । आम मान्छेहरुलाई अन्याय र अत्यचारका बिरुद्ध लड्न सक्ने बनाएको छ सलाम उनका सृजनाहरुलाई । दर्जनौ पटक तिर्थ तिम्सिनालाई नेपाली साहित्य सृजना र राजनीतिका बिषयमा कुरा गर्न एफ.एम. स्टेशनमा बोलाए उहाँले कहिले समय दिन सक्नु भएन गुनासो उनी सँग छैन समयले साथ दिएन साथ दिएको भए यतिबेला दर्जनौ पटक उनका विचार उत्तेजक भावनाहरु सुन्थे । समय बलवान छ, समयले छोड्यो आत्माग्लानी बाहेक केही छैन । २०६३÷६४ साल तिर होला सायद पाँचथर टाइम्स साप्ताहिकमा अनुभव र अनुभुती स्तम्भ लेख्दा देखि एफ.एम.मा स्रष्ठा र सृजना कार्यक्रम चलाउदासम्म नेपाली साहित्य र जिवनका अन्तरंगहरु घोल्ने प्रयत्न कहिल्यै र्मुत हुन सकेन । वडा अध्यक्ष भए पछि विकास र समृद्धिका बिषयमा छलफल गर्ने समय पनि मिलेन । जनतालाई उनका बारे धेरै सुनाउने अवसर पनि सायद जुरेन होला होला ।
राज्य पुर्न संरचना पछि तिर्थ सर र हाम्रो एउटै वडा पर्यो । उनी स्थानिय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको उमेदवारको दावी गरिरहेका थिए । नेकपा एमालेको तत्कालिन क्षेत्रिय कमिटिको अध्यक्ष र पुर्न संरचना पछि पालिका कमिटी सचिवालय सदस्यको हैसियतले तथा पुरानो कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको हैसियतले समेत उनले वडा अध्यक्षको उमेद्धवारी दावी गर्नु स्वाभाविक थियो । तर अरुले आकाङ्क्षा राख्नु हुदैन भन्ने हिसावले उनले उमेदवारी सिफारिस गर्ने बैठकमा आफ्नो लामो स्पष्ठिकरण सहितको पत्र लेख्नु भएको थियो । पछिल्लो समयमा साना कुराले समेत उनलाई छुने र त्यस्को प्रतिकृया दिन थाल्नु भएको थियो । चुवानको बेला धेरै दिन संगै हिड्ने अवसर प्राप्त भयो । जनतामा माझमा उनले कहिल्यै भोट मागेनन् म काम गर्न सक्छु भन्ने लागे भोट दिनु भोट हामी सबैलाई दिनु ७ जनालाई नै भन्थे । मैले कम्जोरी गरे भने मलाई गाली गर्ने अधिकार तपाइहरुलाई नै सुरक्षित छ भन्थे । नभन्दै उनी रातको १० बजे सम्म जनताका कामको लागि एउटा हातमा क्यान्डिल बोकेर अर्को हातले सिफारिस पत्र तयार गर्दै गरेको दर्जनौ पटक भेटे देखे लाग्थ्यो जनताका सहि प्रतिनिधि चुनिएछ । उमेद्धवार सिफारिस गर्ने ठाउँमा पनि थिए गर्भ लग्थ्यो । उहाँको कम्जोरी भनेको नै मदिराको सेवन हो । मदिरा सेवन गरेपछि मजाक र रौसिने स्वभाव थियो । कडा मिजासका तिर्थ सर जस्ले झण्डै ४० बर्ष सम्म बिभिन्न बिध्यालयहरुमा अध्यापन गर्नु भयो । सो अबधिमा नेपाल शिक्षक संगठनको अध्यक्ष भएर समेत २ कार्यकाल पुरा गरे । उनी जनताका माझमा वडा अध्यक्ष भन्दा पनि हेडसरका नामले नै बढी चिनिन्थे । सबै सँग समान ब्यवहार गर्ने तिर्थ सरका रमाइला किस्साहरु पनि छन् । उनी वडा अध्यक्ष हुनु भन्दा अगाडी शिक्षक संगठनको अध्यक्ष थिए । अस्पतालमा फलफुल वितरणको कार्यक्रम आयोजना भएको थियो अतिथिहरु आए आयोजक छैनन् । पछि तिर्थसर आए र भने हामीलाई के रुगिंराखेको बाडिदिएको भए हुन्थ्यो नी भन्छन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई अतिथि र अथिति छुट्याउन नसक्ने हाकिम चाहिन्दैन भन्दै भाषण गर्ने तिर्थ सर जिवनको अन्तिम समय पनि जनताका विचमा जनताका काममा नै बिते उनीबाट जनताका प्रतिनिधिहरु धेरै कुरा सिक्नु पर्छ र धेरै कुराबाट सुध्रिनु पर्छ । कार्यक्रममा आफ्ना कुरा दमदार ढंगले राख्ने तिर्थ तिम्सिना पछिल्लो पटक कम बोल्न थालेका थिए । उनको पछिल्लो समय आलोचना आहार विहारका कारण शुरु भएको थियो । जनताको काम राती पनि नभनी जतिबेला पनि गर्ने । प्रशासनिक काममा समेत दक्ष तिर्थ तिम्सिना हिलिहाङ गाउापालिकामा रसिक वडा अध्यक्षका रुपमा परिचित थिए । पछिल्लो गाउकार्यपालिकाको बैठकमा वडा नं. ७ हिलिहाङको रिपोटिङ गर्ने क्रममा हाम्रा त ढंगा माटोले इन्जिनियरहरुको अनुहार हेर्न मिल्दैकि के हो अध्यक्ष ज्यू भने र पालिका अध्यक्ष भुवानी प्रसाद लिङदेनलाई सोधेका थिए । उनले त्यो प्रश्नको उत्तर पाए कि पाएनन् ।
जनताका विकास निर्माण प्रतिको इच्छामा आफुलाई निरन्तर सहभागी हुदा हुदै जीवनको अन्तिम लडाइ लड्न पनि जनताका माझमा नै सरिक तिर्थ राज तिम्सिनाको दिवंगत आत्मले चिर शान्ती पाओस् । उनको निडर भावले जनताका माझमा लागेका भावनाहरु राख्ने क्रियाशिल योध्दाका उत्तराधिकारीहरुले निरन्तर जनताका पक्षमा काम गर्न सके मात्र उनको आत्मले चिर शान्ती पाउने छ । भाव पुर्ण श्रदान्जली सहित सलाम एकचेपाली साहिलालाई ।